Ulwazi lweshishini |
Yintoni iCatheter yeFoley?
Ziziphi izinto eziluncedo kwibanga lezonyango i-silicone tubing?
Iiklinikhi zasesibhedlele ezingaphandle kwesibhedlele ziyakwazi ukubona ngokubanzi iintlobo zeempahla zerabha, ezifana neetyhubhu ze-silicone zonyango, iiplagi ze-silicone iisirinji, ziboshwe ezandleni zentambo ye-silicone ezi, inqanaba langoku kwintsimi yezonyango ukongeza kwinani elininzi lamachiza amayeza izixhobo zonyango. , ngoko kutheni i-silicone p...
Ukuphuhliswa kweemveliso ze-silicone zebakala lezonyango
Irabha ye-Silicone njengento ekrwada yeyeza emva kwamashumi eminyaka yokusetyenziswa kwezonyango, kudala yamkelwa luluntu lwezonyango, ukusetyenziswa kwamashishini amaninzi amaninzi ukwenza irabha ye-silicone yonyango njengeyona njongo iphambili yophuhliso kunye noyilo, Irabha yerabha ye-silicone yonyango...
Indlela yokukhetha i-catheter ye-silicone efanelekileyo?
Ukuthelekiswa kwezinto ezahlukeneyo zecatheter ye-urethral